Waxtarka Noocyada Mawduuca ee B2B Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Noocee noocee ah ayaa laga dallacayaa warbaahinta bulshada oo bixisa saameynta ugu weyn? Waad la yaabi kartaa. Maskaxda ku hay in liiskan noocyada noocyadu aanu ahayn waxa guud ahaan si fiican u qabta - kaliya jawaabta ka soo iibsadayaasha B2B ee ku saabsan waxyaabaha leh saamaynta ugu badan ka dib markay eegeen markii bulshada lala wadaagay.
Mudnaanta, waa tan liiska noocyada ugu saameynta badan ee qeexitaannada ka soo baxa Eccolo Media:
Studies Case - Sawirro faahfaahsan oo ku saabsan sida macaamiisha u geeyo alaabada ama adeegyada iibiye.
Tilmaamaha Farsamada ee Faahfaahsan - sharaxaad qoto dheer oo ku saabsan astaamaha astaamaha iyo shaqeynta, ama tilmaamaha tallaabo tallaabo ee loogu talagalay hirgelinta xalka tiknoolajiyada.
Waraaqaha White - falanqaynta tiknoolajiyada ama arrimaha ganacsiga iyo isbeddellada ka imanaya inta badan madax-bannaanida, iibiyeyaasha-dhexdhexaad dhexdhexaad ah
Podcasts - duubista maqalka ee markhaatiyada macaamiisha ama wadahadal lala yeelanayo khubarada mowduucyada laga sii daayo Websaydhka ama lagu soo dejisan karo desktop ama aaladda gacanta
blog Posts - qoraallo kooban oo khadka tooska ah looga diro oo mawduucyada hadda jira ku daaweeya qaab aan rasmi ahayn, iyadoo looga dan leeyahay ka-qaybgalka macaamiisha iyo rajooyinka.
Infographics - matalaadda muuqaalka ee xogta iyo isbeddellada, iyada oo ujeedadu tahay in si kooban loogu gudbiyo macluumaadka adag.
videos - waxaa loo isticmaalay isgaarsiin suuq ballaaran ah, laga bilaabo markhaatiyada macaamiisha illaa bandhigyada alaabada illaa wareysiyada fulinta.
Qoraallada - macluumaadka alaabta, adeegga, ama iibiyaha.
Wargeysyada - joornaalka dhaqameed ee qaabka elektaroonigga ah oo sida caadiga ah ku soo koobaya maqaal deg deg ah oo leh xiriiriyeyaal daaweyn dheer
eBuugaag - dukumiintiyo qaab-dheer ah oo loogu talagalay in lagu isticmaalo qaab dijitaal ah, iyagoo u gudbinaya macluumaadka qaab muuqaal ah oo dhiirrigelin iyo inta badan is-dhexgal ah.
Webinars - aqoon-isweydaarsiyo khadka tooska ah laga bixiyo oo bixiya bandhigyo ama aqoon isweydaarsiyo ha ahaadeen kuwa nool ama qaab horay loo sii qorsheeyay oo dalab ah.
Xaashida Waraaqaha Tartanka - isbarbar dhig sifooyinka iyo howlaha alaabada laga helo iibiyeyaal badan.
Majaladaha Macaamiisha - daabacaadda iyo khadka tooska ah, gaarsiinta wararka shirkadda iyo sahaminta arrimaha muhiimka ah iyo isbeddellada.
Muqaal Muqaal ah - bandhigyada khadka tooska ah ee internetka oo daboolaya faahfaahinta sheyga ama isbeddellada muhiimka ah, sida caadiga ah iyadoo xoogga la saarayo jaantusyada iyo sawirrada.
Mugga saddexaad ee Eccolo Media 2015 B2B Warbixinta Sahaminta Mawduuca Teknolojiyada, waxaan weydiinay kuwa teknoolajiyada iibsada, injineerada ilaa c-suite, inay noo sheegaan waxa ay ku cunayaan kanaalka bulshada inta lagu jiro iibsashada tikniyoolajiyadda.
Hay'addeena ayaa soo saartay hanaan caqli gal ah oo aan ugu yeerno dhisme maamulka nuxurka macaamiisha. Inkasta oo kor ku xusan ay ka hadlayaan waxa ugu saameynta badan ee go'aanka iibsiga, maskaxda ku hay inaad caadi ahaan tahay inaad adeegsato qaabab yar oo saameyn yar si aad ugu jiidato iibsadayaasha qoto dheer. u horseed qof inuu codsado daraasad kiis.
Maaha wax u fudud sida nooc ka kooban noocyada kale, waa sida ay ugu wada shaqeeyaan guud ahaan istiraatiijiyadda marinka iskutallaabta. Waa kuwan macluumaad kale oo waaweyn oo lagu bixiyay muuqaalkan ka socda Eccolo Media, Maxay Ka Koobantahay Bulshadu Racfaan Galmo?
Tags: faylasha maqalkamaqaalo blogposts blogBlogsdaraasadowaraaqaha shaqada ee tartamada iibiyamaamulka nuxurkanoocyada nuxurkamajaladaha macaamiishaTilmaamaha tiknoolajiyada oo faahfaahsandheefshiidkaeBuugaagEmail MarketingemailsFiidiyowyada SuuqgeyntaSuuqgeynta WebinarmultimediawargeysyadaPodcastssheekooyinka guushaMuuqaal duubey webkawaraaqaha caddaanka ahwhitepapers
Xalka Waqtiga-dhabta ah ee lagu hagaajinayo Ka-qaybgalka Emailkaaga